GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Iwu ndị na-achị àjà dị iche iche (1-21)
Otu iwu ga na-achị nwa afọ na onye mbịarambịa (15, 16)
Àjà a na-achụ maka mmehie e mere n’amaghị ụma (22-29)
Ahụhụ a ga-ata onye kpachaara anya mehie (30, 31)
E gburu onye dara iwu Ụbọchị Izu Ike (32-36)
Ndị Izrel ga-adụnye ihe dị yọrị yọrị n’ọnụ ọnụ ala uwe ha (37-41)
15 Jehova gwara Mosis okwu ọzọ, sị: 2 “Gwa ndị Izrel okwu, sị ha, ‘Mgbe unu mechara bata n’ala m na-enye unu ka unu biri na ya,+ 3 unu achọọ isi n’ìgwè ehi ma ọ bụ n’ìgwè ewu na atụrụ chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ọma* unu na-achụrụ Jehova,+ ma ọ̀ bụ àjà a na-esu ọkụ+ ma ọ̀ bụ àjà mmadụ chọrọ iji mezuo nkwa pụrụ iche o kwere ma ọ̀ bụ onyinye si ya n’obi+ ọ chọrọ inye ma ọ bụ onyinye a na-enye n’oge ememme unu dị iche iche,+ 4 onye na-eweta onyinye ya ga-ewetakwara Jehova àjà ọka, ya bụ, otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa* ntụ ọka e gwere nke ọma,+ nke a gwara otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu hin* mmanụ. 5 Unu ga-ejikwa otu ụzọ n’ụzọ anọ nke otu hin mmanya chụọ àjà mmanya mgbe unu na-achụ àjà a na-esu ọkụ+ ma ọ bụ mgbe unu ji nwa ebule ọ bụla na-achụ àjà. 6 Ma ọ bụ, mgbe unu na-achụ ebule n’àjà, unu ga-eji ụzọ abụọ n’ụzọ iri nke otu efa ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara otu ụzọ n’ụzọ atọ nke otu hin mmanụ chụọ àjà ọka. 7 Unu ga-ewetakwa otu ụzọ n’ụzọ atọ nke otu hin mmanya ka ọ bụrụ àjà mmanya. Ọ bụ àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova. 8 “‘Ma ọ bụrụ na unu chọrọ iji oké ehi chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ+ ma ọ bụ àjà udo+ ma ọ bụ àjà unu ji emezu nkwa pụrụ iche+ unu kwere, 9 unu ga-ewetakọta oké ehi ahụ na àjà ọka,+ ya bụ, ụzọ atọ n’ụzọ iri nke otu efa ntụ ọka e gwere nke ọma, nke a gwara ọkara otu hin mmanụ. 10 Unu ga-ewetakwa ọkara otu hin mmanya ka ọ bụrụ àjà mmanya.+ Ọ bụ àjà a na-esu ọkụ, àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova. 11 Ọ bụ ihe a ka a ga-eme mgbe unu na-achụ oké ehi ọ bụla ma ọ bụ ebule ọ bụla ma ọ bụ nwa ebule ọ bụla ma ọ bụ ewu ọ bụla n’àjà. 12 N’agbanyeghị ole unu na-achụ n’àjà, ọ bụ ihe a ka unu ga-eme mgbe unu na-achụ nke ọ bụla n’àjà. 13 Ọ bụ otú a ka nwa afọ Izrel ọ bụla ga-esi na-achụ àjà a na-esu ọkụ, ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova. 14 “‘Ọ bụrụ na onye mbịarambịa nke binyeere unu ma ọ bụ onye bi n’obodo unu kemgbe ọtụtụ afọ chọrọ ịchụ àjà a na-esu ọkụ ka ọ bụrụ àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova, o kwesịrị ịchụ ya otú unu si achụ ya.+ 15 Ọ bụ otu iwu ga na-achị ununwa ndị so n’ọgbakọ a na onye mbịarambịa binyeere unu. Ọ ga-abụ iwu ga-adịgide adịgide nke ọgbọ unu niile ga na-edebe. Unu na onye mbịarambịa ga-abụ otu n’ihu Jehova.+ 16 Otu iwu na otu ntụziaka ga na-achị unu na onye mbịarambịa binyeere unu.’” 17 Jehova gwakwara Mosis, sị: 18 “Gwa ndị Izrel okwu, sị ha, ‘Mgbe unu ga-abata n’ala m na-akpọga unu, 19 unu ewee rie nri* ala ahụ mepụtara,+ unu ga-enye Jehova onyinye. 20 Unu ga-eji ntụ ọka* si ná mkpụrụ mbụ+ unu wetara n’ubi mee achịcha ndị dị okirikiri ma jiri ha nye onyinye. Unu ga-enye ha n’onyinye otú unu si enye ihe si n’ebe unu na-azọcha ọka. 21 Unu ga na-enye Jehova ụfọdụ ntụ ọka si ná mkpụrụ mbụ unu wetara n’ubi ka ọ bụrụ onyinye a na-enye ya n’ọgbọ unu niile. 22 “‘Ọ bụrụ na unu emehie ma ghara ime ihe a niile Jehova nyere Mosis n’iwu, 23 ya bụ, ihe niile Jehova si n’ọnụ Mosis nye unu n’iwu, malite n’ụbọchị Jehova nyere ha n’iwu ruo n’ọgbọ unu niile, 24 ọ bụrụ na e mere ihe ahụ n’amaghị ụma, ya abụrụkwa na nzukọ unu amaghị banyere ya, nzukọ unu niile ga-achụ oké ehi n’àjà ka ọ bụrụ àjà a na-esu ọkụ, àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova. Unu ga-achụkwa àjà ọka na àjà mmanya ha na ya na-agakọ otú e nyere iwu ka e si na-achụ ha,+ jirikwa otu nwa ewu chụọ àjà mmehie.+ 25 Onye nchụàjà ga-ekpuchiri nzukọ Izrel niile mmehie ha, a ga-agbagharakwa ha mmehie ha,+ n’ihi na e mere ya n’amaghị ụma, ha wetakwara onyinye ha ka e jiri ha chụọrọ Jehova àjà a na-esu ọkụ, wetakwa àjà mmehie ha n’ihu Jehova n’ihi ihe ha mere n’amaghị ụma. 26 A ga-agbaghara nzukọ Izrel niile na ndị mbịarambịa binyeere ha n’ihi na ha niile mere mmehie ahụ n’amaghị ụma. 27 “‘Ọ bụrụ na onye* ọ bụla emehie n’amaghị ụma, ọ ga-eweta nne ewu na-agafebeghị otu afọ ka ọ bụrụ àjà mmehie.+ 28 Onye nchụàjà ga-ekpuchiri onye* ahụ mehiere n’amaghị ụma mmehie ya nke o mere n’ihu Jehova, ka e wee kpuchie mmehie ahụ. A ga-agbagharakwa ya.+ 29 Otu iwu ga na-achị ụmụ afọ Izrel na onye mbịarambịa binyeere ha ma a bịa n’ihe gbasara mmehie mmadụ mere n’amaghị ụma.+ 30 “‘Ma onye* kpachaara anya mehie,+ ma ọ̀ bụ nwa afọ ma ọ̀ bụ onye mbịarambịa, ọ na-ekwulu Jehova. A ga-egbu ya.* 31 A ga-egburịrị onye* ahụ maka na o leghaara okwu Jehova anya, mebiekwa iwu ya.+ Mmehie ya ga-adị ya n’isi.’”+ 32 Mgbe ndị Izrel nọ n’ala ịkpa, ha hụrụ otu nwoke ka ọ na-akpa nkụ n’Ụbọchị Izu Ike.+ 33 Ndị hụrụ ka ọ na-akpa nkụ kpọọrọ ya bịakwute Mosis na Erọn na nzukọ ahụ niile. 34 Ha jichiri ya+ n’ihi na e kwubeghị ihe a ga-eme ya. 35 Jehova wee gwa Mosis, sị: “A ga-egburịrị nwoke ahụ.+ Nzukọ ahụ niile ga-esi n’ebe unu mara ụlọikwuu kpọpụ ya ma tụọ ya nkume.”+ 36 Nzukọ ahụ niile wee si n’ebe ha mara ụlọikwuu kpọpụ ya ma were nkume tụgbuo ya, otú Jehova nyere Mosis n’iwu. 37 Jehova gwaziri Mosis, sị: 38 “Gwa ndị Izrel okwu, sị ha na ha ga na-adụnye ihe dị yọrị yọrị n’ọnụ ọnụ ala uwe mwụda ha n’ọgbọ ha niile. Ha ga-adụnyekwa eriri na-acha anụnụ anụnụ n’elu ebe ahụ a dụnyere ihe ahụ dị yọrị yọrị n’ọnụ ọnụ ala uwe mwụda ha.+ 39 ‘Unu ga-adụnye ihe ahụ dị yọrị yọrị ka unu na-ahụ ya wee na-echeta ihe niile Jehova nyere n’iwu ma na-eme ha.+ Unu esokwala obi unu na anya unu, bụ́ ihe ndị na-eme ka unu kpaa àgwà ka ndị akwụna hapụ m fewe chi ọzọ.+ 40 Iwu a ga-eme ka unu na-echeta ihe niile m nyere n’iwu. Unu ga-emekwa ha ma bụrụ ndị dị nsọ n’anya Chineke unu.+ 41 Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu, onye kpọpụtara unu n’Ijipt iji gosi na m bụ Chineke unu.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.’”+
^ Efa bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu efa bụ lita 2.2. Gụọ B14.
^ Hin bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Otu hin bụ lita 3.67. Gụọ B14.